Mpanamboatra jiro sy mpamatsy jiro - Jiro Giga
Famolavolana jiro matihanina sy mpanamboatra jiro nanomboka tamin'ny 1995.
Led Pendant & Other
Rindrina / Spot / Track
Ny mpanamboatra jiro dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana jiro sy jiro kalitao. Mifantoka amin'ny famolavolana jiro LED, famokarana ary vahaolana.
Ahitana jiro haingon-trano sy jiro ara-barotra ny isan-karazany.
Giga lighting classic interior design 0465
LED Ceiling& Ampahany LED pendant 0465Style: Jiro maoderina, Jiro ankehitriny, Jiro haingon-tranoFitaovana: Iron + AcrylicHabe: Dia. 400mm / 600mm / 800mmLumen: 80-85LM/W, azo ahenaLoko: Fasika fotsy / Sandy mainty / Golden borosy / Hosodoko hazoLoharano hazavana: LED 2835Taratasy fanamarinana: CE / CB / VDE / TUV / UL / ETL / SAA
Giga Lighting Classic Interior Design 0512
PendantAndiany laharana: 0512Style: Jiro postmodernismeFitaovana: Stainless vy& AcrylicHabe: Dia. 550mm / 800mmVita: HosodokoLoharano hazavana: LED 3030Taratasy fanamarinana: CE / CB / VDE / TUV / UL / ETL / SAA
Giga Lighting Classic Interior Design 20210
Gigalighting ao amin'ny No. 36, Zhongshan Two Road, Shiqi, Zhongshan, Guangdong, Sina（Paositra: 528400) vokatra lehibe 20210.Miaraka amin'ny traikefa manankarena amin'ny famokarana, mianatra tsy tapaka ny teknolojia mandroso avy any ivelany ary mampiditra fitaovana saro-takarina. Ankoatr'izay, manana rafitra fitantanana kalitao tsara izahay mba hanaovana fanaraha-maso hentitra momba ny kalitao. Izany rehetra izany dia manome fepetra tsara ho an'ny famokarana avo lenta.
Giga Lighting Classic Interior Design 20169
Jiro jiro LED, pendant LEDFitaovana: Aluminum + vy + AcrylicHabe: Dia. 420mm / 600mm / 800mmLumen: 4300LM, 5270LM, 8600LMLoko: Fasika fotsy / Sandy mainty / Golden borosyLoharano hazavana: LED 2835Taratasy fanamarinana: CE / CB / VDE / TUV / UL / ETL / SAA
Serivisy OEM / ODM
Ny jiro Giga dia mpanamboatra jiro matihanina ary mpiara-miombon'antoka ara-barotra matanjaka ho an'ny entana sy tetikasa LED. Miaraka amin'ny traikefa 25 taona mahery amin'ny famoahana vokatra jiro mankany amin'ny tsena Eoropeana, tsy isalasalana fa mino izahay fa manam-paharetana, azo itokisana, tompon'andraikitra ary mafana fo. Fantatsika fa, miaraka amin'ny faharetana bebe kokoa sy ny fikirizana bebe kokoa, dia hanana fahafahana bebe kokoa isika hanolotra vahaolana tsara kokoa ho an'ny mpanjifantsika. Noho izany, dia miziriziry foana izahay amin'ny "Miezaka ny tsara indrindra, mifantoka amin'ny olona, ​​matoky ary mandresy amin'ny toe-tsaina mianatra sy mpandraharaha."
1. Ny famolavolanay:Ankoatra ny fahaizantsika amin'ny orinasa ODM, dia manolotra serivisy OEM mifaninana ihany koa izahay
2. Za-draharaha: Maherin'ny 25 taona ny mpanamboatra haingon-trano matihanina, ny mpiara-miasa azo itokisana.
3. OEM / ODM: Efa mandefa vokatra an-jatony izahay amin'ny mpanjifa any amin'ny firenena samihafa isan-taona
Naorina fifandraisana mafy orina amin'ny tsena mahazatra
Matihanina Shina mpanamboatra jiro-Giga jiro mpanamboatra
Ny fenitra avo lenta dia mandeha amin'ny famolavolana sy famokarana.
Giga Lighting dia mpanamboatra sy mpanondrana jiro matihanina sy efa ela. Notohanan'ny famokarana jiro maherin'ny 25 taona ho an'ny fanondranana fotsiny, dia nanompo mpanjifa hatrany Eoropa, Amerika Avaratra ary Amerika Atsimo izahay.
Manomboka amin'ny jiro tsotra indrindra, ny Giga Lighting dia nijery ny filan'ny mpanjifa Eoropeana sy Amerikana. Nanomboka tamin'ny fanamboarana santionany nomen'ny mpanjifa izahay ary nanangona traikefa tsikelikely tamin'ny famolavolana famokarana. Miaraka amin'ny fahatakarantsika ny firafitry ny vokatra sy ny hakanton'ny hazavana sy ny aloka, dia namolavola tsikelikely ny famolavolana ny vokatray izahay.
Ankehitriny, Giga Lighting dia manana toby famokarana roa ao Zhongshan City, Faritanin'i Guangdong, Sina, miaraka amin'ny vokatra 1000 mahery. Manana vokatra isan-karazany izahay. Miorina amin'ny fomba maoderina, ny vokatra dia mandrakotra anatiny mankany ivelany, haingon-trano ho an'ny varotra.
Giga Lighting dia niditra tao amin'ny sehatry ny LED nandritra ny fotoana ela. Hatramin'ny taona 2013, namolavola rafitra vokatra LED manokana izahay. Nitombo haingana koa ny ampahany amin'ny vokatra LED. Ny fitambaran'ny LED sy ny mpamily, ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny singa elektrika ary ny fampiharana matotra amin'ny fampiononana vokatry ny hazavana no fototry ny fifaninanana Giga Lighting.
Nandritra ny 25 taona lasa, ny Giga Lighting dia naka "Avelao ny olona hankafy ny hatsarana, ny fampiononana ary ny hafanana avy amin'ny hazavana sy ny aloka" ho toy ny fahitany, ary manolo-tena handroso miaraka amin'ny endrika sy lamaody farany indrindra, saingy mahagaga amin'ny rafitra kalitao tonga lafatra sy mora vidy. vidiny.
Tamin'ny taona 2021, ny "Kyocera Philosophy" dia nampiharina tamin'ny mpiara-miasa rehetra tamin'ny fo.
Ny fahafaham-po bebe kokoa avy amin'ny mpanjifa amin'ny kalitao tsara kokoa sy ny serivisy dia hijanona ho laharam-pahamehanay mandrakizay!
RAHA MANANA FANONTANIANA BETSAKA IANAO, MANORATRA AMINAY